ဒီမင်းရှားရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းအကြောင်း | Popular News
dementia ရောဂါ အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ရသနည်းဆိုသော် ဦးနှောက်ထဲတွင် ကျန်းမာသန်စွမ်းနေသော သွေးကြောမျှင်လေးများ၊ အာရုံကြောကလာပ်စည်းလေးများကို amyloid beta နှင့် tau proteins (အသားဓာတ်များ) များက စတင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံများတွင် ထိုလူဆိုး protein ၂ မျိုးကို နှိမ် နင်းနိုင်သည့် ဆေး၊ ၎င်းတို့ ရန်မှကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် dementia ကာကွယ်ဆေးများကို ဆေးသုတေသနပညာရှင်များက အမြန်ဆုံး ရှာ ဖွေထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အပူတပြင်း ကြိုးပမ်းနေကြပါသည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရများကလည်း ထိုသုတေသနအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ အများဆုံး အကုန်ခံလျက်ရှိပါသည်။
dementia ရောဂါဖြစ်ခြင်း ယေဘုယျအဆင့် ၃ ဆင့်
အဆင့်(၁) mild cognitive impairment (mct)
သတိနှင့်အသိဥာဏ်၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်အား စတင်၍ လျော့ရဲ အားနည်းလာသော အစကနဦး အဆင့်။
အဆင့်(၂) dementia ရောဂါ စွဲကပ်လာသော အဆင့်
ဆရာဝန်က ရောဂါဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပြီး၍ သတ်မှတ်ချက်ချပြီး သောအဆင့်။ (Dementia diagnosis given)
အဆင့်(၃) Alzheimer’s dIsease ဖြစ်လာသော အဆင့်
ဤအဆင့်တွင်လည်း ဆရာဝန်က စစ်ဆေးပြီး alzheimer’s ရောဂါလက္ခဏာအဖြစ် သတ်မှတ်ချက်ချပြီးသော အဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျလက္ခဏာများမှာ-မိသား စုဝင်များ၊ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများကို လုံးဝမမှတ်မိတော့ပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခု (ဥပမာခဲတံ)ကို ပြလျှင် ဘာအတွက်အသုံးချသည်ကို လုံးဝမသိ တော့ပါ။ မိမိ၏ နေ့စဉ်ဘဝအတွက် လှုပ်ရှားရသောအရာ အားလုံး(သို့မ ဟုတ်)အများအားဖြင့်ကို လုပ်ကိုင် လှုပ်ရှားရန်သတိမရှိတော့ပါ။ (ဥပမာ-ကိုယ်လက် အင်္ဂါသန့်ရှင်းခြင်း၊ အညစ်အကြေး စွန့်ခြင်း၊ အစားအ သောက်စားခြင်း)။ ထို့ကြောင့် ၂၄ နာရီ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်လာ၍ လူကြီးများပြုစုစောင့်ရှောက် သောဂေဟာ (Nursing home) သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရသည့် အဆင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဤအဆင့် ၃ ဆင့်တွင် ပထမ အဆင့် (mci) ၌သာ ရောဂါသက် သာရန်ဆေးကုနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယ နှင့် တတိယအဆင့်သို့ ရောက်သွားလျှင် မည်သည့်ဆေး (သို့မဟုတ်) ကာကွယ်ဆေးကမျှ မကယ်နိုင် တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ရောဂါဖြစ်ခါစ အခြေအနေ mci အဆင့်ကို ဦး အောင်သိရှိရန် အလွန်အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ထိုကဲ့သို့ အစကနဦး dementia လက္ခဏာပေါ်စအခြေအနေကို သိသာစစ်ဆေးရန် အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် ရောဂါအခြေအနေစစ်ဆေးသည့် စစ်တမ်းများ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှိသည်။ ယုံ ကြည်ကိုးစားရသော web site များမှာ helpguide.org, alzheimers australia, yourbrain matters. org.au, stage test စသည့်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်၊ အဆင့်မမီခဲ့လျှင် ဆရာဝန်ထံ အမြန်ဆုံးသွားရပါမည်။ gp ဆရာဝန်တိုင်းတွင် ထိုစစ်တမ်းများရှိ၍ ဆရာဝန်က အခြားသောရောဂါများကိုလည်း ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးမှ dementia ရောဂါအဆင့်ကို သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ချက် ပေးပါမည်။
gp ဆရာဝန်၊ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်တို့ကသာလျှင် dementia ရောဂါကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ ရောဂါအဆင့်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်၊သတ် မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်။ အခြားမည်သူကမျှ မပေးနိုင်ပါ။
DEMENTIA ရောဂါကာကွယ်နည်း အချက် ၅ ချက်
(၁) မိမိ၏ဘဝနေထိုင်မှု ပြောင်းလဲ ပစ်ရမည်
အရေးကြီးဆုံးမှာ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အလွန်အမင်းဝသောရောဂါများမဖြစ် ရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုယူရမည်။ ဆား၊ သကြား၊ ဆီဦးထောပတ်၊ တိရစ္ဆာန်အဆီ အစားကြူးခြင်းတို့ ကို လျှော့/ရှောင်၍ စားသောက်တတ်ရန်လေ့ကျင့်ရမည်။ ထို့အပြင် ရှေ့ဆက်၍ ဖော်ပြမည့် DEMENTIA ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ကိုယ်ခန္ဓာလေ့ကျင့်ခန်း၊ အစားအ သောက်စားပုံစားနည်းတို့ကို လိုက်နာရပါမည်။
(၂) ခန္ဓာကိုယ် လေ့ကျင့်ခန်းဖြင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ရမည်
ခန္ဓာကိုယ် လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ခြင်းအားဖြင့် နှလုံးနှင့်ဦးနှောက် အပြန်အလှန် သွေးလည်ပတ်သွားလာမှု အားကောင်းလာသည့်အပြင် ဦးနှောက်ကို နုပျိုရွှင်လန်းစေသည့် endorphin ဓာတ် (neuro-transmitter) ကို ထုတ်လုပ်ပေးသဖြင့် အထူးအကျိုးရှိပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာတွင် နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ရမည်။ အင်အားစိုက်ထုတ်မှုပါဝင်ရမည်။ ထို့ကြောင့် ချွေးထွက်ရမည်၊ နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်ရမည်။ မောဟိုက်ရမည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများ ရှေးဦးစွာ ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေး၍ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ခံယူရ မည်။ အထူးအကျိုးကျေးဇူးရှိသော ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းများမှာလမ်း လျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ရေကူးကန်အတွင်း ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ပင်ပေါင်ကစားခြင်း၊ ကြက်တောင်ကစားခြင်း၊ တင်း နစ်(စ်)ရိုက်ခြင်း၊ ကခြင်း (အနောက်တိုင်းကကွက်များဖြစ်သည့် line dancing, waltz, tango, cha cha, quick step, samba, rumba, jive စသဖြင့်တို့ ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးအားကစားရုံတွင် လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခြင်း။ (မိမိ အသက်အရွယ်၊ ခွန်အား၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို လိုက်၍ အလေးမ၊ လှေလှော်၊ ဆိုင်ကယ်စီး စက်များဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်း ယူနိုင်ရန်ါပာ ရှိ အား ကစား လေ့ကျင့်ပေးသူများက စီစဉ်ပေး နိုင်ပါသည်။
taichi, yoga တို့အပြင် ချော်မလဲရန် ကိုယ်ခန္ဓာ ယိမ်းယိုင်မှုကိုထိန်းပေးနိုင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
ကခြင်းသည် သီချင်းနား ထောင်ရသည့်အပြင် ကကွက်ခြေ လှမ်းများကို ဦးနှောက်က မှတ်ရသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်လှုပ်ရှား မှုများ လုပ်ရသည်။ မိတ်ဆွေသူငယ် ချင်း၊ အပေါင်းအသင်းများနှင့်တွေ့ ဆုံခွင့်ရသည်။ မိတ်ဆွေအသစ်များ တိုးပွားသည်။ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဦးနှောက် နှစ်မျိုးလုံး လေ့ကျင့်ခန်းရ၍ စိတ် ပျော်ရွှင်မှု၊ ဦးနှောက်နုပျိုရွှင်လန်းမှု စသဖြင့် အဘက်ဘက်က အကျိုး ကျေးဇူးများသည့် လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အသက် ၁ဝဝ ကျော်နေရသည့် လူကြီး ဦးရေ ၆ သောင်းကျော်ရှိပါသည်။ တိုင်းပြည် အရွယ်အစားနှင့်ကြည့် မည်ဆိုလျှင် အလွန်တိုးတက်ထင်ရှားသော လက္ခ ဏာဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဆေး ဝါးကုသမှု၊ ကျန်းမာရေး သုတေသနရှာဖွေမှု၊ dementia ရောဂါကာကွယ်ရေးတွင် ဆေးပညာရှင် များ၏ ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်း များကို အားပေးမှုတို့ကို ကြည့်လျှင် အလွန်ထိပ်တန်းကျသောနိုင်ငံ ဖြစ် နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့အ ပြင် ဆေးသုတေသနအတွက် တီ ထွင်သောစက်ပစ္စည်းများ၊ ကျန်း မာရေး၊ိနာနညအငေ ကာကွယ် ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရသုံး စွဲသည့် ငွေအားပမာဏကို ကြည့် ပြန်လျှင်လည်း ထိပ်တန်းကပြေးနေ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက ရှေ့တန်းကျန်းမာ ရေးတွင် အတုယူအားထားနေရ သော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ dementia ကာကွယ်ရေးတွင် အသုံးပြုနေသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လူကြီးများကို (၁ဝဝ-၃) လမ်းလျှောက်နည်းဖြင့် လမ်းလျှောက်ရန် သင်ကြားပါသည်။ လမ်းလျှောက်ရင်း ခေါင်းထဲက (ဦး နှောက်ထဲက) (၁ဝဝ-၃=၉၇ယ ၉၇-၃=၉၄ယ ၉၄-၃=၉၁ယ ၉၁-၃=၈၈ယ ၈၈-၃=၈၅ယ ၈၅-၃=၈၂ စသည်ဖြင့် နံပါတ်ဆုံးအောင်) တွက်ချက်၍ လမ်းလျှောက်ခိုင်းပါသည်။ အခြား အပေါင်း၊ အနုတ်၊ အမြှောက်၊ အစား များနှင့်လည်း သင်္ချာပုစ္ဆာများကို ဦးနှောက်သုံး ဖြေရှင်းရင်းလမ်း လျှောက်နိုင်ပါသည်။ ဤနည်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ဦးနှောက် လေ့ကျင့်ခန်းကိုတစ်ချိန်တည်း ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသဖြင့် dementia ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဟောခန်းများ၌ လူကြီး များကို ထို(၁ဝဝ-၃) လမ်းလျှောက်နည်းဖြင့် လမ်းလျှောက်စေခြင်း၊ အက ကချိုးကကွက်များကိုသင်ခြင်း၊ ပါးစပ်လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခိုင်း ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦးနှောက် နှစ်မျိုးလုံးကို လှုံ့ဆော်လေ့ကျင့်ခန်းပေးခြင်းဖြစ်၍ Body + cognition (brain) exercise = cognicise ဟူ၍ dementia ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရအသစ်ပင် ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လူကြီးများကို ပါစပ်နှင့် ခံတွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများ ကိုလည်း လေ့ကျင့်ခိုင်းပါသည်။ ဂျပန်ဆေးသုတေသန ပညာရှင်များက လူကြီးများအသက်ကြီးလာလျှင် အစားအသောက်ကို ကောင်းစွာ စားနိုင်ရန်မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ် သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အသက်ကြီးလာ၍ အစားအသောက် ကောင်းစွာမစားနိုင်လျှင် စိတ်ဓာတ်ကျ၊ စိတ်အားငယ်၊ အပြင်သို့ သွားလိုစိတ်မရှိ၊ အင်အားလျော့ စိတ်ဓာတ်ကျ ဆင်းသည့်ရောဂါ စသည့်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာတတ်ပါသည်။ အစာကို ကောင်းမွန်စွာဝါးစား နိုင်ရန်၊ ပါးစပ်ကိုကောင်းစွာဖွင့်နိုင် ရန်၊ စားသည့်အစာကို ကောင်းစွာ မျိုချနိုင်ရန် လူကြီးများကို ပါးစပ် လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခိုင်းပါသည်။
”အား” ”အီး” ”အူး” (aah, eee, ooo) ဆို၍ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း။ ပါးစပ်ကိုပါးကြော၊ နား ကြော၊ မေးကြောများ တင်းသွားသည်အထိ အသကုန်ဖြဲ၍ ဖွင့်၍ ”အား” ”အီး” ”အူး”ဟု ဆိုရပါမည်။ ထပ်ခါတလဲ ဆိုရပါမည်။
ထို့အပြင် ”ပ တ လ က” (pa ta la ka) ဆို၍လည်းပါးစပ်နှင့် လျှာ၊ အာခေါင်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလုပ်ရပါသည်။ ပပပပ၊ တတတတ၊ လလလလ၊ ကကကကဟူ၍အသံထွက်ကာ ”ပတလက” စကားလုံးများကို ထပ်ခါတလဲရွတ်၍လေ့ကျင့်ရပါမည်။ ဗြိတိန်၊ ဂျာမနီနိုင်ငံတို့တွင် လူ ကြီးများ ကျန်းမာရွှင်လန်းစေရန် (ကိုယ်ရောစိတ်ပါ) ကခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပင်ပေါင်ကစားခြင်းတို့ကို လေ့ကျင့်ခိုင်းပါသည်။ ထို့အ ပြင် လူကြီးများသည် အသက်ကြီး လာလျှင် ခလုတ်တိုက်ချော်လဲသည့် အခါများရှိတတ်၍ ကျန်းမာရေးအားကစားရုံများ၌ တစ်ထွာမျှအမြင့်ရှိ သောကြိုးလေးများတန်းထားသည့် ကြိုးတန်းများထဲမှ လမ်းလျှောက်ရ သောလေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ရသည်။
(၃) ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ခန်းဖြင့် မိမိဦးနှောက်ကို စိန်ခေါ်ရမည်
လူ၏ဦးနှောက်သည် ကြွက်သားတစ်ခုကဲ့သို့ အစဉ်အမြဲ လှုံ့ဆော်မှုပေးနေမှသာလျှင် ရှင်သန်ကျန်းမာနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးလျှင်သုံး မသုံးလျှင်ဆုံးဆိုသည့် နိယာမအတိုင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ dementia ရောဂါကာကွယ်ရေးတွင် မိမိ၏ ဦးနှောက်ကိုလည်း ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆိုထားပါသည်။ ဦးနှောက်ကို စိန်ခေါ်ရန် လုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများမှာ တရားထိုင်ရမည်၊ မသင်ဖူးသေးသော မတတ် ဖူးသေးသော နည်းပညာအသစ်အ ဆန်းကိုသင်ရမည်(ဥပမာ ဘာသာစကားအသစ်၊ လက်မှုစက်မှုပညာအသစ်၊ ပြင်သစ်စကား၊ ဂျပန်စကားသင်ခြင်း၊ နက္ဓတ်ဗေဒပညာကိုလေ့လာခြင်း၊ ဥယျာဉ်ပန်း ခြံပုံစံဖော် ခြင်း)၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ စာရေးခြင်း (ဝတ္ထု၊ ဆောင်းပါး၊ ပုံပြင်၊ ကဗျာ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ မိသားစုဘိုးဘွား စဉ်ဆက် ရာဇဝင်စုဆောင်းရေးသား ခြင်း)၊ သီချင်းဆိုခြင်း၊ ပန်းပင်သစ်ပင်ပျိုးထောင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ အနံ့အရသာ အစားအစာ ဆေးဘက် ဝင်အသုံးပြုရသည့် အရွက် အပွင့် အပင်ငယ်များ ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ sudoku, scrabble, crossword puzzles, jigsaw puzzles, chess, trivia ဦးနှောက်လှုံ့ဆော် ဖြေရှင်းရသည့်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသော သင်္ချာအင်္ဂလိပ်စာအဖြေရှာရသော ကစားနည်းများ၊ သုတပဟေဠိခဲယဉ်းစွာ တွေး၍ဖြေရှင်းရသော ကစားနည်းမျိုးစုံကို ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် ကစားပေးရမည်။ ဤအထက်ဖော်ပြပါ ဦးနှောက်ကိုစိန်ခေါ်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးနေ့စဉ် ပုံမှန်လုပ်သွားလျှင် ဦးနှောက်အတွင်း ရှိဆဲ(လ်)က လာပ်စီးများ၊ သွေး ကြောမျှင်လေးများ ကျန်းမာရှင် သန်၍ သတိနှင့်မှတ်Óဏ်ကို တိုး တက်စေသည်။ ဦးနှောက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးကို အကျိုးပြုစေသည် ဟုဆိုပါသည်။ မိမိ၏ စိတ်ကိုလည်း ပေါ့ပါးရွှင်လန်းစေပါသည်။
(၄) နေ့စဉ် စားသည့် အစားအ သောက်ပုံစံကို ပြောင်းလဲရမည်
မည်သူမဆို ကျန်းမာရေး ထိခိုက်သည့် ရောဂါတစ်မျိုးမျိုး ဖြစ်လာလျှင် ထိုရောဂါကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ရောဂါအတွက် သောက်ရသောဆေးဝါးများမှ ဆင့် ပွားရလဒ်များကြောင့်သော်လည်း ကောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်သာမက ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေသည့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ များပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါသည်။ ဥပမာ ဦးနှောက်သို့ သွေးလည်ပတ်သွားလာမှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ဦးနှောက်လေ့ ကျင့်ခန်းများ မလုပ်နိုင်၍ အလိုလို အားနည်းလာခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျ ဆင်းသည့်ရောဂါဝင်လာခြင်း စသဖြင့် အဘက်ဘက်မှ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ဖြစ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင့်(၁)တွင် ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ကျန်းမာရေးကောင်းရန်မှာ အဓိက ပထမအချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ dementia ရောဂါသုတေသနဆေးပညာရှင်များက လူကြီးများ အသက်ရှည်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏ အစားအသောက်စားသော ပုံစံကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ဂျပန်လူ မျိုးများသည် ပဲနို့ရည်၊ ပဲပြား အဖြူများလုပ်သည့် ပဲတစ်မျိုးမှပြုလုပ်သည့် ပဲနို့ရည်၊ ပဲပြား၊ ပဲအနှစ်နှင့် ပြုလုပ်သည့် miso paste, miso soup တို့ကို နေ့စဉ်ပုံမှန် စားကြပါသည်။ ထို soy အစားအစာများတွင် iso flavones ဟုခေါ်သည့်အသီးအနှံမှ ဆင်းသက် သောဟော်မုန်းကဲ့သို့ ဓာတ်တစ်မျိုး ပါဝင်သည်။ ထို iso flavones ဓာတ်များသည် ကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အရိုးြ<ွကပ်ဆပ်သော ရောဂါ (osteo porosis) တို့ ကို ကာကွယ်မှုပေးနိုင်၍ ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းကို အထူးအားပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို SOY ပဲမှဆင်းသက်သည့် အစားအစာများအပြင် ကျောရိုးနက်ပြာရောင် ငါး(blue backed fish) လူအကျိုးပြု ငါးအဆီ (omega3fatty acids epa+dha) အများဆုံးပါသည့်ငါးများ mac-keral, salmon, tuna, sardines တို့ကို များစွာစားသုံး သင့်ပါသည်။ ထို omega3fatty acids epa+dha ငါးအဆီများသည် ဦးနှောက်ရှင်သန်ကြီးထွားစေ၍ ကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ အဆစ်ယောင်ရောဂါ (arthritis) ကာကွယ်မှု၊ သက်သာမှုပေးသဖြင့် လူကြီးများ ကျန်းမာအသက်ရှည်ခြင်းကို အကျိုးပြုသည်ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် အရောင်ပါသောအ သီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ခရမ်းရောင် ကန်ဇွန်းဥ(အခွံ အဖြူ ရောင်၊ အတွင်း၌ ခရမ်းရောင်)တို့ ကို အများအပြားစားကြပါသည်။ ဂျပန်ဆေးသုတေသန တွေ့ရှိချက် နောက်တစ်မျိုးမှာ curcumin ဓာတ်ပါသည့် ဆနွင်းသည် ယောင် တင်းမှုကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရောဂါဖြစ်စေသည့်အညစ် အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်စွမ်းရှိသည့် ဓာတ်ပါရှိခြင်းကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိပါသည်။ အချုပ်ပြောရလျှင် ဂျပန်လူမျိုးများ၏ စားသောက်ပုံစံ သည် အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်း အစာပုံစံမျိုး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။
ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရန် အသားများ လျှော့စား၍ သစ်သီး၊ အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို ပို၍ စားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထူး သဖြင့် အရောင်ပါသောအသီးအနှံ များကိုစား၍ တတ်နိုင်သမျှ အစိမ်း စားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အစာစား လျှင် အလွန်အကြူးမစားမိရန် သတိ ပြုရပါမည်။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း အရေးကြီးဆုံး အစာချက်ယန္တရား ကြီးကို မိမိ၏ အစာချက်ခြင်းအလုပ် ကို ကောင်းစွာလုပ်နိုင်ရန် အနားပေးရမည်။ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ထိုမှသာ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိမည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျန်းမာရေး နှင့် အသင့်တော်ဆုံး စားသောက် ပုံစံကို ရှာဖွေသုတေသနပြုကြရာ တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာခွဲ တစ်ခု ၏ ဘာသာဝင်များ စားသုံးသည့် သက်သတ်လွတ် စစ်စစ်ကို တွေ့ရှိ ခဲ့ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်မှ ဆင်းသက် သည့်အရာအားလုံး ရှောင်ကြဉ်၍ မြေကြီးမှထွက်သော ကောက်ပဲသီး နှံ၊ သစ်စေ့သစ်ဥ၊ သစ်သီး၊ အသီး အနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသာ စားသော နည်းဖြစ်ပါသည်။ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ချိစ့်၊ ကြက်ဥများ မပါပါ။ ဓာတုဆေးများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ မပါသည့် မြေသြဇာတွင် စိုက်ပျိုး၍ အရောင်ဆိုးဆေး၊ ဓာတုပစ္စည်းရည် မဖျန်းသော သစ်သီး၊ အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသာ စားသော vegan diet ဖြစ်သည်။ vegan diet စားလိုပါက အောက်ပါအစားအသောက်အုပ်စု (၄)ခုမှ အစားအစာများကိုပါဝင်အောင် နေ့စဉ်စားသုံးရပါမည်။
၁။ ကောက်စပါးမှထွက်သော အသီးအနှံ
၃။ သစ်စေ့သစ်ဆံမှရသည့် မြေပဲ (nuts) များ
၄။ အရောင်မျိုးစုံပါသည့် သစ်သီး၊ အသီးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်။
အထူးသဖြင့် အနီရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင် ကန်ဇွန်းဥ၊ ခရမ်းရောင် ဂေါ်ဖီပန်း၊ ခရမ်းသီး၊ သလဲသီး၊ ကာဂျက်ဥ၊ အရောင်မျိုးစုံ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အနီ ရောင်လိမ္မော်သီး စသည်တို့ ဖြစ် သည်။ အထက်ပါ အရောင်ပါသော သစ်သီးသစ်နှံများတွင် ဦးနှောက် ကိုနုပျိုစေသည့် anthocyanins ဓာတ်များပါသည်ဟု ဆို ထားပါသည်။ တတ်နိုင်သရွေ့ အစိမ်းစားရမည်။
vegan diet မစားမီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်။b12 အားဆေးထိုးရန် သံဓာတ်အား ဆေးစားရန်လိုအပ်ပါက စားရန် ဖြစ်သည်။
မိမိ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစစ်ဆေး၍ ဆရာဝန်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံယူရမည်။ နဂိုမူလ အခြေအနေမှ ပို၍စားချင်စဖွယ် ဖြစ်အောင် ဆား၊ သကြား၊ အချို မှုန့်၊ အရောင်၊ အရသာအတု၊ အဆီ၊ ဓာတုပစ္စည်း(ကြာရှည်ခံရန်)တို့ဖြင့် အမျိုးမျိုး ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော အစားအစာများကို ရှောင်ရမည်။
(၅) လူမှုဆက်ဆံရေး အပြန်အလှန် နှီးနှောဖလှယ်ဆက်သွယ်ခြင်း
dementia ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာ လူကြီးများ အသက်ကြီးလာလျှင် လူမှုဆက်ဆံရေးအပြန်အလှန်နှီးနှောဖလှယ်ခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်းများရှိရန် လိုအပ်ပါ သည်။ အသက် ၆၅၊ ၇ဝ မတိုင်မီက ရုံးလုပ်ငန်းဌာန၊ စီးပွားရေးစသည်တို့၌ နှစ်ပေါင်း ၃ဝ၊ ၄ဝ ကျော် အ လုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်ဆွေများ၊ တပည့်တပန်းများနှင့် မိမိ၏နေ့စဉ် ဘဝမှာ လူမှုဆက်ဆံရေးထိတွေ့ မှု၊ တုံ့ပြန်ဆက်သွယ်မှု၊ နှီးနှော ဖလှယ်မှု များစွာရှိခဲ့ပါသည်။ အလုပ်များသော်လည်း မိမိဘဝတွင် ဝိုင်း ရံနေသူများစွာရှိခဲ့၍ ဘဝစိုပြေမှုရှိခဲ့ပါသည်။ အသက်ကြီးလာ၍ အလုပ်မှအနားယူ စီးပွားရေး လုပ် ငန်းများမှ ရပ်နားစသည့် ဘဝမှတ်တိုင်များ ကျော်ဖြတ်ခဲ့သော်လည်း လူမှုဆက်ဆံရေး နှီးနှောဖလှယ်မှု လုပ်ရပ်များမှ အနားယူစရာမလို ပါ။ ထိုသို့ အနားယူလိုက်ပါက အ ထီးကျန်ဘဝသဖွယ်ဖြစ်လာ၍ စိတ်ဓာတ်ကျသော ရောဂါ၊ တစ်ကိုယ်တည်းသီးခြားရပ်တည်နေရခြင်း၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် အ ဆက်အသွယ်ပြတ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ဝမ်းနည်းအားငယ်သည့် စိတ်၊ တွေ ဝေသည့်စိတ်များ ဖြစ်လာတတ်ပါ သည်။ ထိုအခါ ဦးနှောက်ထိုင်းမှိုင်း မှုဖြစ်၍ လှုံ့ဆော်မှုအား နည်းလာသဖြင့် တဖြည်းဖြည်း demen-tia ရောဂါဖြစ်ရန် နီးစပ်လာတတ်ပါသည်။
လူကြီးများ အသက်ကြီးလာလျှင် မိမိ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ဖြစ်စေ၊ သက်တူရွယ်တူ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ဖြစ်စေ၊ နေ့စဉ်စကားပြော၊ (သို့မဟုတ်) သွားလာ လှုပ်ရှား(သို့မဟုတ်) ဆက်သွယ်တုံ့ ပြန်စသည့် လူမှုဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းများကို မလွဲမသွေ နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ မိသား စုဝင်များအနေနှင့်လည်း ဤအရေး ကြီးချက်ကို သတိမူ၍ လူကြီးမိဘ များကို အပြင်သို့ ခေါ်ထုတ်ရမည်။ ၎င်းတို့ ဝါသနာပါရာ သာယာလှပ အပန်းဖြေနိုင်သည့် နေရာများသို့ လိုက်ပို့ရမည်။ လူကြီးများအနေ နှင့်လည်း မိမိ၏မိသားစုဝင်များနှင့် ဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ နှင့်ဖြစ်စေ၊ အစားအသောက် ထွက်၍ စားခြင်း၊ ပျော်ပွဲစားထွက် ခြင်း၊ ခရီးတိုထွက်ခြင်း၊ ဘုရား ကျောင်းကန်များသို့ သွားခြင်း၊ ဘာသာရေး ပွဲတော်များ၊ ဈေး ရောင်းပွဲများ၊ ပန်းပြပွဲ၊ ပန်းချီပြပွဲ၊ ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်များသို့ သွား ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု ”ဆို က တီး” ပွဲ များ၊ စာပေဟောပြောပွဲများသို့သွား ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံသို့သွား၍ ရုပ်ရှင် ကြည့်ခြင်း စသဖြင့် လူမှုဆက်ဆံ ရေး တုံ့ပြန်ဖလှယ်မှုများကို လုပ် နိုင်ကြပါသည်။ မိတ်ဆွေအချင်း ချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စကားပြော သတင်းဖလှယ်၊ ရယ်စရာမောစရာ၊ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များ ပြောရင်းဆိုရင်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ နုပျို လန်းဆန်းမှု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ပြုံးရယ်ခြင်း၊ ဟာသ စကားပြော၍ အားရပါးရ ရယ်ခြင်းတို့သည် စိတ် ပေါ့ပါးမှုကို ဖြစ်စေသည့်အပြင် ဦး နှောက်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကိုယ် ခန္ဓာအတွင်း နှလုံးနှင့် အခြားသွေး ကြောများကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေနိုင်၍ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသက်ကြီး၍ စိတ်ဓာတ်ကျ၊ ငိုင်ခြင်း၊ မှိုင်ခြင်း၊ တွေးတောပူပန်ခြင်းတို့ လျှော့၍ ပျော်ပျော်နေ သေခဲသည်ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို လိုက်နာရန် တိုက်တွန်းရင်း ဤဆောင်းပါးကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။ လူ ကြီးမိဘများအားလုံး dementia ရောဂါမှ ကာကွယ်မှုရ၍ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။
1/ nhk world japan tv- medical frontiers (english documentary)
-preventing dementia (4 th may 2016)
-targeting proteins, fighting dementia (5 th july 2016 www3.nhk.or.jp
2/ alzheimers australia+ yourbrinmatters. org. au
3/ alzheimers.org.uk+ alzheimers society uk
4/ helpguide.org+ eldergym.com
5/ how to stay young (bbc documentary)
လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ